ရင်ပြင် Ash ကို Valve အားကုန်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ရင်ပြင် Ash ကို Valve အားကုန်(24 များအတွက်စုစုပေါင်း ရင်ပြင် Ash ကို Valve အားကုန် ထုတ်ကုန်များ)
ရင်ပြင် Ash ကို Valve အားကုန် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ ရင်ပြင် Ash ကို Valve အားကုန် ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား ရင်ပြင် Ash ကို Valve အားကုန် / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် ရင်ပြင် Ash ကို Valve အားကုန် များထဲမှ Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. ။
tag ကို: Square ကိုကယ်ဆယ်ရေး Valve , ရင်ပြင် Ash ကို Valve အားကုန် , ရင်ပြင် Rotary Valve
အလုပ်အဖွဲ့နိယာမ ပထမဦးစွာကြယ်အမျိုးအစားချအများအားဖြင့် pneumatic output ကိုစနစ်အသုံးပြုသည်။ ဖိအား output ကိုစနစ်ကဒါမှမဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာဖိအား output ကို system အတွက်, ကြယ်အမျိုးအစား discharge...
tag ကို: မိလ္လာကုသမှု Filter , စဉ်ဆက်မပြတ် Band Filter , Papermaking Machine အတွက် Filter နှိပ်ပါ
နည်းပညာဆိုင်ရာ parameter သည် မော်ဒယ်စွမ်းဆောင်ရည် parameters တွေကို Filter (ရိယာ (M2) filter plate ပုံသဏ္(ာန် (mm) filter plate အထူ (mm) filter ကိတ်မုန့် (mm) filter အခန်းအခန်း (L)၊ (55097305, M3) စက်တစ်ခုလုံးအရွယ်အစား (ရှည်လျားပြီး x အကျယ် x) (mm)...
DC က 24 V ကိုသွေးခုန်နှုန်းဂျက်အဆို့ရှင်အပျော့
tag ကို: Air Protection ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် Pulse Valve , AC အမြှေး Valve , Pneumatic Electromagnetic Valve 220V
ကျွန်တော်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏သွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင်၊ ကုန်းပြင်မြင့်အမျိုးအစား; N282 ကွိုင်ဗို့အား DC24v AC220v 1 လက်မ 1.5 လက်မ2လက်မ 2.5 လက်မ3လက်မသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်ကိုက်ညီမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ASCO solenoid...
လျှပ်စစ်သံလိုက် filter ကိုသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်
tag ကို: အိတ်အမျိုးအစားစုဆောင်းခြင်း Pulse Valve , 2.5 လက်မ Air ကို Compressor Solenoid Valve , သံမဏိ solenoid အဆို့ရှင် 220V ဆက်သွယ်ရေး
ဖွဲ့စည်းပုံ Pulse Valve သည် solenoid အဆို့ရှင်၊ အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်၊ အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်၊ အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်၊ သေးငယ်တဲ့အမြှေးပါး၊ အလုပ်လုပ်အခြေခံ diaphragm သည် electromagnetic pulse အဆို့ရှင်အားရှေ့နှင့်နောက်ရှိလေယာဉ်ခန်းနှစ်ခုအဖြစ်ခွဲခြားသည်။ compressed...
အိတ် filter ကို 1/2 solenoid အဆို့ရှင်
tag ကို: မြင့်မားသောဖိအား 1/2 Solenoid Valve , DCF လူမီနီယမ်အလွိုင်းလျှပ်စစ်ရုပ်ရှင်ကား Valve , လျှပ်စစ်စွမ်းအားလျှပ်စစ်သံလိုက်ပြောင်းပြန်အဆို့ရှင်
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ Pulse Duster ၏ဖုန်မှုန့်ဖယ်ထုတ်မှုယူနစ်၏လျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင်ပတ် ၀ န်းကျင်သည်လိုအပ်ချက်များကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာသင့်သည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင်အဆို့ရှင်သည်လျှပ်စစ်သံလိုက်အားအဆို့ရှင်၏ပတ် ၀...
အိတ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်စုဆောင်း filter ကိုအိတ်ထောက်ခံမှုဘောင်
tag ကို: Multi ပူးတွဲအရိုးစု , နွေ ဦး ရာသီဖုန်ကောက်ခံရေး , ဖုန်စုဆောင်းအိတ်အိတ်
115x2000 မီလီမီတာဖုန်မှုန့်စုဆောင်း filter ကိုလှောင်အိမ်
tag ကို: အရည်အသွေးမြင့် Venturi Bag Filter , Organosilicon Coated ဖုန်စစ်ထုတ်အိတ် , ချေးစက်မှု filter ကိုအိတ်
အိတ် filter ကိုများအတွက် filter ကိုအိတ်မူဘောင်၏အဓိကလိုအပ်ချက်များမှာ: ၁) ဂဟေဆက်ထားသည့်အဆစ်အားလုံးသည်ခိုင်မာရမည်။ ဖုန်အရိုးစုနှင့် filter အိတ်တို့၏မျက်နှာပြင်သည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်သင့်သည်။ ဂဟေဆော်ရန်အမာရွတ်၊ ခုံး၊ ၂) filter...
tag ကို: Organosilicon 3.5mm Filter Cage အိတ် , Organosilicon Spray Stardust Air Filter , ဂဟေစက်ရုံအတွက် Cage အရိုး
venturi ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင်သည်အထူးဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်းဆိုင်ရာမူဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Venturi ပြွန်၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်အလွန်အင်အားကြီးမားသည်။ ၎င်းသည်ဖုန်အိတ်များ၏ဘ ၀ ကိုကာကွယ်ပေးပြီးလေစီးဆင်းမှုကိုညီမျှစေသည်။ ထို့ကြောင့် venturi...
ပြားချပ်ချပ်အိတ် filter ကိုအိတ်နွေ ဦး ဘောင်
tag ကို: spliced ​​အရိုးစု filter ကိုအိတ် , စက်မှုစစ်ထုတ်အိတ်လက်ကျန် , စက်မှုအိတ်အိတ်အိတ် Filter အိတ်
ကုန်ပစ္စည်းအသွင်အပြင် သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အပေါ်ယံအိတ်သည်ပျက်စီးခြင်းမရှိစေရန်မျက်နှာပြင်သည်ချောမွတ်။ ဖြောင့်ဖြောင့်နေသည်။ ဂဟေဆော်ခြင်းသည်ယူနီဖောင်းဖြစ်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံမှာကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီးကြာရှည်ခံသည်။...
filter ကိုအိတ်ထောက်ခံမှုများအတွက် filter ကိုဖုန်မှုန့်လှောင်အိမ်
tag ကို: ကာဗွန်သံမဏိ Star Bag အိတ်လှောင်အိမ် , Venturi အိတ်ပံ့ပိုးမှု filter ကိုအိတ် , Venturi Filter Bag အိတ်အရိုး
သွပ် dedusting အရိုးစု သွပ်ရည်စိမ်အရိုး၏လှပသောအချက်များအတွက်သွပ်ရည်စိမ်ဖုန်မှုန့်အရိုးစုနှစ်မျိုးရှိသည်။ ဘုံသွပ်အကျိတ်များနှင့်အရောင် van ည့်ခံခြင်း၊...
silicone မှုန်ရေမွှား filter ကိုအိတ်
tag ကို: ကာဗွန်သံမဏိဖုန်စစ်ထုတ်အိတ် , ကြယ်ပွင့်ပုံစံ Filter Bag အိတ် Venturi Cage , Cage filter ကို Cage filter
(၁) ဖုန်မှုန့်ခြင်းတောင်းဖုန်မှုန့်အဖုံးစစ်ထုတ်စက်တစ်ခုသည်သတ္တုပြားများဖြင့်ဝိုင်းထားသည့်ဆလင်ဒါဖြစ်ပြီး၊ ဆလင်ဒါ၏အစွန်းများကိုလေကြောင်းလိုင်းနှင့်ဆက်သွယ်သည်။ ဖုန်မှုန့်အိတ်များသည်ပန်ကာများမှထုတ်သောလေဖိအားကို အသုံးပြု၍...
အိတ် filter filter ကိုကောက်ခံမှုန်ရေမွှား
tag ကို: Venturi ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏အိတ် , မြင့်မားသောအပူချိန်အမှိုက်အိတ် , Organosilicon Blowout Duster Bag
ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်းအရိုးစု၏ filter နှင့် dust ဖယ်ရှားရေးနိယာမအပေါ်သုံးသပ်ခြင်း ကြီးမားသောဖိုင်ဘာပါဝင်သောဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးယန္တရားသည်သာမန်ဖုန်မှုန့်နှင့်ကွဲပြားသည်။ အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းတွင်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်း (၂) မျိုးရှိသည်။...
Organosilicon ပစ္စည်း filter ကိုလှောင်အိမ်
tag ကို: ချောမွေ့သောလေလေသံမဏိစစ်ထုတ်စက် , ဘဲဥပုံလေသန့်ရှင်းရေးဖုန်ကောက်ခံသူ , ညစ်ညမ်းသောအိတ်ပါအိတ်လှော်ခြင်း
အပြင်ဘက်တွင်မြင့်မားသောခွန်အား၊ အပူချိန်၊ အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းများဖြင့်သွန်းလုပ်သည်။ ဆလင်ဒါပစ္စည်းကိရိယာများ၏အပြင်ဘက်ရှိအကာအကွယ်ပေးသောသံမဏိပြားများသည်စက်၏အားနှင့်သက်တမ်းကိုများစွာမြှင့်တင်ပေးသည်။...
Organosilicon ရေမှုန်ရေမွှား filter ကိုအိတ်
tag ကို: Organosilicon Venturi သံမဏိအိတ်စစ်ထုတ်စက် , silicone ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောဖုန်မှုန့်အိတ် , ဖုန်စုဆောင်းအိတ်အရိုး
ခန္ဓာကိုယ်၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်အပိုင်းတစ်ခုလျှင် ၁ မီတာရှိပြီးအဆစ်တစ်ခုစီတွင်ခုံနှင့်ခုံးအဆစ်များပါရှိသည်။...
အိတ် filter များအတွက်ကာဗွန်သံမဏိ filter ကို
tag ကို: ဒေါင်လိုက်အိတ် filter Bag အိတ် , သွပ်ရည်စိမ်အိတ်၏ Filter , ဖုန်ကောက်ခံသူများအတွက်အိတ်
ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားသည့်အရံဟုလည်းလူသိများသည့်ဖုန်အရိုးစုကိုအိတ်ဖွင့်ခြင်းအကျိတ်ဟုလည်းလူသိများသည်။ အရိုးစုသည်ဖုန်မှုန့်စစ်အိတ်၏နံရိုးဖြစ်သည်။ အိတ်လှောင်အိမ်၏အရည်အသွေးသည်စစ်ထုတ်သည့်အိတ်၏အလုပ်လုပ်အခြေအနေနှင့်သက်တမ်းကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။...
ဆိုဒီယမ်ကယ်လစီယမ်ကို double alkali desulfurization deduster
tag ကို: desurphurization နှင့်ညစ်ညမ်းပစ္စည်း , ဆိုဒီယမ်ကယ်လ်စီယမ်ကိုနှစ်ဆ Alkali ဖုန်စုဆောင်း , နှစ်ချက် Alkali Deduster
ဆိုဒီယမ်ကယ်လစီယမ်နှစ်ဆအယ်လကာလီ desulphurization လုပ်ငန်းစဉ် (NaOH / Ca (OH) 2) ကိုအသုံးပြုပြီးဆိုဒီယမ်ကယ်လစီယမ်နှစ်ဆအယ်လကာလီ desulfurization deduster process သည်ထုံးကျောက် / gypsum နည်းလမ်းနှင့်ဆိုဒီယမ် alkali နည်းလမ်းကို အခြေခံ၍...
CCJ / DG ကိုသက်ရောက်မှု multi multi ကိုပြွန် duster
min ။ အမိန့်: 3000 Bag/Bags
tag ကို: DG သက်ရောက်မှု Multi Tube Duster , CCJ / DG သက်ရောက်မှု Multi Tube Duster , CCJ သက်ရောက်မှု Multi Tube Duster
CCJ / DG ၏ယေဘူယျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်ပြွန်မှုန့်ပေါင်းစုံကိုသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းမှုအပိုင်းကိုအပိုင်း ၂ ပိုင်းခွဲခြားထားသည်။ အပေါ်နှင့်အောက်အကွက်များ၊ အပေါ်အောက်အကွက်တွင် ၀ င်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်ပိုက်များ၊...
ထိရောက်သော desulphurization ရေ Processor ကို
tag ကို: ဓာတ်ငွေ့သန့်စင်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်း , CTT Predesulfurizing သန့်စင် , လှိုင်းလေထန်စေသည့်ဘောလုံး Desulphurization Purifier ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်
CTT အမျိုးအစားမတိုင်မီကသက်ရောက်မှုလှိုင်းလေထန်ဘောလုံး desulfurization နှင့်စွန့်ပစ်ဓာတ်ငွေ့သန့်စင်စက်အသေးစိတ်ကို: CTT ၏ကြိုတင်သက်ရောက်မှုလှိုင်းလေထန်သောဘောလုံး desulphurization ဓာတ်ငွေ့သန့်စင်စက်သည်ဆန်ခါပြား၊ ရေပေါ်ကိုယ်ထည်လှိုင်းများ၊...
tag ကို: Single- စက်အိတ် filter , Pulsed Bag ကောက်ခံရေး , Pulse Bag အမျိုးအစားဖုန်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်း
UF အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစက်အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းအသေးစိတ်အကြောင်းအရာ: တစ် ဦး က, UF အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစက်အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း UF အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစက်အိတ်စစ်ထုတ်စက်သည်ပိုမိုချွေတာ။ ရိုးရှင်းပြီးကျစ်လစ်သည်၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီးထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။...
tag ကို: Single- စက် Filter ကိုစုဆောင်း , တစ်ခုတည်းစက် Filter ဖုန်ကောက်ခံရေး , အထည်အိတ်စစ်ထုတ်စက်မှုန့်စုဆောင်း
PL တစ်ခုတည်းအိတ်အမှုန့်စုဆောင်းသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - PL-A စီးရီးတစ်ခုတည်းအိတ်စစ်ထုတ်စက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှဒီဇိုင်းဆန်းနိုင်ငံခြားထုတ်ကုန်များ၏အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအိတ်သေးသေးစစ်ထုတ်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။...
HD အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစက်အိတ် filter ကို
tag ကို: HD အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစက်ဖုန်စုဆောင်း , : D အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစက်အိတ် filter ကို , မြင့်မားသောထိရောက်မှုတစ်ခုတည်းစက်ဖုန်ကောက်ခံရေး
HD အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစက်အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းအသေးစိတ်အကြောင်းအရာ: စက်အိတ်တစ်ခုတည်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်းစက် HD အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစက်အိတ်စစ်ထုတ်စက်သည်ဘိလပ်မြေစက်ရုံ၏ထိပ်၊ ရေလှောင်ကန်၏အောက်ခြေ၊...
tag ကို: Docking ဖုန်အရိုးစုထုတ်လုပ်သူများ , Docking ဖုန်အရိုးစုစျေး , ဖုန်အရိုးစု Frame
ကုန်ကြမ်း အရည်အသွေးမြင့်နိမ့်ကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုး, သွပ် galvanized သံမဏိဝါယာကြိုး, သံမဏိဝါယာကြိုးများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဘဝ ဖုန်မှုန့်အရိုးစုသည်စီစစ်အိတ်၏နံရိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပေါ့ပါးပြီးတပ်ဆင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသင့်သည်။...
Rotary ပြာရိနာစွဲအဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
DC က 24 V ကိုသွေးခုန်နှုန်းဂျက်အဆို့ရှင်အပျော့ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လျှပ်စစ်သံလိုက် filter ကိုသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အိတ် filter ကို 1/2 solenoid အဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အိတ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်စုဆောင်း filter ကိုအိတ်ထောက်ခံမှုဘောင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
115x2000 မီလီမီတာဖုန်မှုန့်စုဆောင်း filter ကိုလှောင်အိမ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပြားချပ်ချပ်အိတ် filter ကိုအိတ်နွေ ဦး ဘောင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
filter ကိုအိတ်ထောက်ခံမှုများအတွက် filter ကိုဖုန်မှုန့်လှောင်အိမ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
silicone မှုန်ရေမွှား filter ကိုအိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အိတ် filter filter ကိုကောက်ခံမှုန်ရေမွှား အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Organosilicon ပစ္စည်း filter ကိုလှောင်အိမ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Organosilicon ရေမှုန်ရေမွှား filter ကိုအိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အိတ် filter များအတွက်ကာဗွန်သံမဏိ filter ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆိုဒီယမ်ကယ်လစီယမ်ကို double alkali desulfurization deduster အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CCJ / DG ကိုသက်ရောက်မှု multi multi ကိုပြွန် duster အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
HD အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းစက်အိတ် filter ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale ရင်ပြင် Ash ကို Valve အားကုန် from China, Need to find cheap ရင်ပြင် Ash ကို Valve အားကုန် as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on ရင်ပြင် Ash ကို Valve အားကုန် produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our ရင်ပြင် Ash ကို Valve အားကုန်, We'll reply you in fastest.
ခြောက်သွေ့စက်များအတွက် Dedusting ကိရိယာများ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ